Gesi detector Fekitori - China Gesi detector Vagadziri, Vatengesi
YQ7 yakawanda-gasi detector
Yakajairwa Yekutarisa Chikamu: CH4 \_ O2 \_ CO \_ H2S \_ CO2 \_ SO2, tembiricha 1. Iyo yakasimba yakavakirwa-mukati pombi inopa inoenderera kuyerera 2. Iyo yakasarudzika tembiricha kuyera 3.Can inoona matanhatu akasiyana magasi uye tembiricha. Optional sensors anowanikwa kuyera mhepo kumhanya, kumanikidza uye hunyoro. 4. Inotorwa yakakwira-yekuita sensor 5. Inoenderana zvizere Tianyun TS-CLOUD otomatiki calibration manejimendi system 6. Maawa makumi maviri nekukurumidza kuyera rekodhi 7. Kuratidzwa kwepamusoro-tsananguro.
JCB4 Inopisa CH4 Gesi Detector
Mafomu: JCB4 inotakurika inogona kutsva gasi detector chinhu chakachengeteka mukati uye chinoputika-chiratidzo chishandiso uye chakagadzirirwa kudzivirira gasi rinopisa. JCB4 inopisa gasi Detector ndeye yakachipa-kudhura, yekuchengetedza-isina imwe gasi yekutarisisa yakagadzirirwa kuchengetedza vashandi kubva kune inotyisa inopisa gasi yekuratidzira mune yakanyanya mamiriro ezvinhu. Kunyangwe iri diki kukura kwayo, iyo JCB4 inopisa gasi Detector inosanganisira maficha anowanzo kuwanikwa chete muhombe yakawanda-gasi monitors kusanganisira hombe, OLED kuratidza, inte ...
1. Iyo yakasimba yakavakirwa-mupombi inopa kuenderera kuyerera 2. Iyo yakasarudzika tembiricha kuyera 3.Can inoona matanhatu akasiyana magasi uye tembiricha. Optional sensors anowanikwa kuyera mhepo kumhanya, kumanikidza uye hunyoro. 4. Inotorwa yakakwira-yekuita sensor 5. Inoenderana zvizere Tianyun TS-CLOUD otomatiki calibration manejimendi system 6. Maawa makumi maviri nekukurumidza kuyera rekodhi 7. Rutsigiro rwepamusoro-tsanangudzo 8. Rough polycarbonate shell, nyore-kubata-9. Mabhii makuru akakodzera kushanda negurovhosi 10. Uni ...
Wireless Multi-Gesi Detector CD4X
Muenzaniso: CD4X Brand: TOPSKY Kunyorera: CD4X inoshandiswa kuyedza CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) panguva imwe chete. Ichi chimbo chakavimbika uye chiri nyore kushandisa. Inokodzera kuputika kwegasi uye marasha uye gasi kubuda mamiriro ane njodzi. Iwe unogona kuirembedza pamugodhi wemarasha unoshanda kumeso uye kudzoka mweya munzira. Chinokosha Feature: Ratidza Maitiro: mitsara miviri, mana manhamba, 2.3 padiki tsvuku dhijitari yekuratidzira chubhu, Unogona kuona zvakajeka mukati memamita makumi matatu. 200-1000Hz Frequency uye RS485 waya data ...
inotakurika yakawanda-gasi detector CD4A
Unyanzvi: Marasha Ekuchengeteka Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Yekuongorora Certification Muenzaniso: CD4A Magadzirirwo 1.kutora CH4, O2, CO, CO2 panguva imwe chete 2. 2-gore garandi 3. Adjustable yakaderera uye yakakwirira maaramu setpoints 4.Exibd I IP54 Zvikumbiro : CD4 (A) inotakurika Multi-gasi detector chishandiso chakachengeteka mukati uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzikisira magasi. Inogona panguva imwe chete kuongorora kusvika kumhepo nhanhatu dzemuchadenga dzinosanganisira kabhoni monoxide (CO), oxygen (O2), combu ...
IR119 isina gasi detector
Main maficha: iR119 ndeye inoshanda isina waya kure dhata yekuparadzira yeakaumbwa gasi detector, chaiyo-nguva dhata yekufambisa kuburikidza neyakavakirwa-mukati isina waya module machenjedzo, shandisa yekuongorora software, inogamuchira inogona panguva imwe chete yakawanda PAD IR119 bidirectional data kutora uye kutonga, kupa chaicho- nguva yekutsvaga ruzivo uye shandisa chiratidzo chemaaramu apo gasi yekuisa geji munda. IR119 ine zvirongwa zvehurongwa uye inogona kugadzirisa imwe kusvika kune shanu sensors inogona kushandiswa kuona gasi rine chepfu ...
VOC inogadzikana organic makemikari gasi detector
Kufanirwa: Coal Mine Kudzivirirwa Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Yekuongorora Certification Muenzaniso: iGas Pro PID VOC Zvishandiso: iGas Pro PID inomiririra yepamberi PID tekinoroji. ini Gasi Pro PID VOC ndiyo diki diki yemunhu VOC detector mupasi. Inogona kuona ese marudzi eVOC pasi pemamiriro eakasiyana tembiricha uye mwando. Kuedzwa kwacho kunokurumidza, kuvimbika uye kwakarurama. Izvo zvinoshanda kune zvine njodzi mamiriro ekushanda uko kune chepfu kana gasi rinotsva riripo. Inogona kupa e ...
CD10 Inotakurika Multi-Gasi Detector
Zvimiro: Rudzi rweyero inosvika gumi nemhando Unogona kuyera mhepo kumhanya yakanyanya multifunction gasi yekutsvaga alarm, Yakavakirwa-mukati sampling pombi, inogona kuderedzwa nzvimbo kure sampling Inogona kutsiva bhatiri, yakagara 120H Sumo: Gesi mita Terminator CD10 multifunction inotakurika gasi yekuona alarm inonyatso kubatanidzwa. chinotakurika chishandiso chiyero methane, carbon dioxide, sulfur dioxide, okisijeni, carbon monoxide, hydrogen sulfide, mhepo kumhanya, tembiricha, mwando, kumanikidza kwemhepo. Yakakura 3.7-mu ...
Inotakurika CH4, O2, CO, H2S yakawanda-gasi detector CD4
Mafomu: CD4 inotakurika Multi-gasi detector chishandiso chakachengeteka uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzikisira magasi. Inogona panguva imwe chete kuongorora kusvika kumhepo nhanhatu dzemuchadenga dzinosanganisira carbon monoxide (CO), oxygen (O2), gasi rinotsva (% LEL), uye hydrogen sulphide (H2S). Yakakwana uye isina huremu, CD4 inotakurika Multi-gasi detector inogonesa inonzwika, inoonekwa uye inodedera maaramu mune yakadzika kana yakakwira alarm mamiriro CD4 inotakurika Multi-gasi detector haina kuenzaniswa i ...